मोरङका मतदाताले प्रत्यक्ष सांसदलाई एक कार्यकाल भन्दा बढी रुचाएनन् - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २४ मंसिर २०७४, आईतवार १२:०४
buy Viagra Plus online, online Zoloft. विराटनगर, २४ मंसिर । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङमा प्रत्यक्षमा विजयी भएका उम्मेदवारहरु दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा आईपुग्दा प्रत्यक्षमा खडाहुनेहरु अपवाद बाहेक पराजित भए ।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि २०७० मा प्रत्यक्षमा विजयी भएका माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डल बाहेक अन्य सवै पराजित भए ।
साविकको क्षेत्र नं ९ हालको क्षेत्र नं १ मा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नगेन्द्र धिमाल २०६४ मा विजयी भएका थिए । उनी २०७० मा प्रतिष्पर्धी बनेनन् । त्यहाँबाट वर्षमान पुन उम्मेदवार थिए । उनलाई नेपाली काँग्रेसका डिगबहादुर लिम्वुले पराजित गरे । २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अघिल्लो पटक विजयी भएका लिम्वु एमालेका घनस्याम खतिवडासँग पराजित भए । अघिल्लो चुनावमा खतिवडा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी थिए ।
साविकको क्षेत्र नं १ अहिले आसपासका केही वडा मिसाएर क्षेत्र नं २ भएको छ । यहाँ २०६४ मा नेपाली काँग्रेस कोशी अञ्चलभरि बढारिँदा सो क्षेत्रबाट आमोद उपाध्ययायले जितेका थिए । उनले एमालेकी गंगा डाँगीलाई पराजित भएका थिए । दोश्रो संविधानसभामा उपाध्ययायले सोही क्षेत्रबाट पुन ः उम्मेदवारी दिए । उनलाई एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले पराजित गर्दै पहिलो पटक काँग्रेसको गढ भत्काएका थिए । २०७४ मा एमालेबाट पुन ः पोखरेलले उम्मेदवारी दिए उनी नेपाली काँग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजालसँग पराजित भए । रिजाल २०६४ र २०७० मा समानुपातिकबाट सांसद थिए ।
साविकको क्षेत्र नं २, ३ र ८ का केही वडाहरु हटाएर अहिले क्षेत्र नं ३ भएको छ । क्षेत्र नं २ मा २०६४ मा माओवादीका लालबहादुर सुस्लिङ मगर, ३ मा सावित्री काफ्ले र ८ मा गोपी आछामी निर्वाचित भएका थिए । मगरले एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारी, ३ मा काफ्लेले एमालेका नरेश पोखरेल र ८ मा एमालेका गुरु वरालाई आछामीले पराजित गरेका थिए । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा मगर उम्मेदवार बनेनन् । २ बाट एमालेका चण्डी राई उम्मेदवार बने उनले नेपाली काँग्रेसका शेखरचन्द्र थापालाई पराजित गरे । ३ बाट एमालेका गुरु बराल उम्मेदवार बने उनलाई नेपाली काँग्रेसका दिलिप गच्छदारले पराजित गरे भने ८ वाट माओवादीका गोपी आछामी उम्मेदवार बने उनलाई एमालेका चन्द्रबहादुर गुरुङले पराजित गरे । ३ वटा क्षेत्रको एउटै क्षेत्र नं ३ मा २०७४ सम्म आइपुग्दा कुनैपनि पुराना नेताले उम्मेदवारी दिएनन् । त्यस क्षेत्रबाट एमालेका भानुभक्त ढकाल र नेपाली काँग्रेसका सुनिल शर्माले उम्मेदवारी दिए । दुवै उम्मेदवार नयाँ थिए । तर बाम गठबन्धनले बाजी मार्न सफल भयो । त्यहाँबाट एमालेका ढकाल निर्वाचित भए । उनी प्रत्यक्षमा पहिलो पटक खडा भएका थिए । यसअघि उनी समानुपातिक सांसद थिए ।
साविकको क्षेत्र नं ६ मा केही गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा मिसाएर क्षेत्र नं ४ बनाईएको छ । सो क्षेत्रबाट २०६४ मा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका उम्मेदवार भीमराज राजवंशी विजयी बनेका थिए । त्यसवेला उनले नेपाली काँग्रेसका महेश आचार्यलाई पराजित गरेका थिए । २०७० मा राजवंशी उम्मेदवार भएनन् । सोही क्षेत्रबाट विजयी बनेको मधेशी जनअधिकारवाट विभाजन भएको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट भक्तीनाथ माझी र नेपाली काँग्रेसवाट महेश आचार्य खडा भए । आचार्य विजयी भए । २०७४ मा काँग्रेसबाट आाचार्य उम्मेदवार बने उनलाई माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले पराजित गरे । मोदी २०७० मा समानुपातिक सांसद थिए ।
साविक क्षेत्र नं ५ मा अहिले साविक क्षेत्र नं ४ केही भाग मिसाएर क्षेत्र नं ५ बनाइएको छ । यस क्षेत्रबाट २०६४ मा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका थिए । २०७० मा भएको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा यादवलाई नेपाली काँग्रेसका अमृत अर्यालले पराजित गरेका थिए । २०६४ मा अर्याल भारी मतले यादवसँग पराजित भएका थिए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अर्याल माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डलसँग पराजित भए । २०७० मा मण्डलले साविक क्षेत्र नं ४ बाट नेपाली काँग्रेसका गयानन्द मण्डललाई ८ मतअन्तरले पराजित गरेका थिए । उनी मात्र लगातार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने मोरङको नेता बनेका छन् ।
साविकको क्षेत्र नं ७ मा केही गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाहरु मिसाएर अहिले क्षेत्र नं ६ बनाईएको छ । यहाँ २०६४ मा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका विजयकुमार गच्छदार विजयी बनेका थिए । गच्छदारले नेपाली काँग्रेसका डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए । गच्छदार मोरङ र सुनसरी दुवै स्थानबाट विजयी भएकाले पछि उनले मोरङ क्षेत्र नं ७ छोडे । २०६५ मा भएका उपनिर्वाचनमा डा.कोइराला विजयी भए । उनले तत्कालिन फोरमका चुमनारायण तवदारलाई पराजित गरे ।
२०७० मा डा. कोइराला पुन ः उम्मेदवार बने । उनी विजयी भए । उनले दोश्रो पटक विजयकुमार गच्छदारलाई नै पराजित गरे । २०७४ मा पनि उम्मेदवारी दिएका कोइराला नेकपा एमालेका लालबावु पण्डितसँग पराजित भए । लालबावु २०६४ मा समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।
एक पटक प्रत्यक्षमा विजयी भएपछि अर्को पटक प्रत्यक्षमा लड्दा विजयी हुन नसक्नुमा चुनाव अघि गरिएका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्न नसक्दा जनताले दोश्रो पटक नजिताएको हुन सक्ने एमाले मोरङका पुर्व अध्यक्ष महेश रेग्मी बताउँछन् । चुनाव अघि धेरै प्रतिबद्धता गरिन्छ पछि पुरा नहुँदा जनता निराश हुने हुँदा नयाँ खोज्ने परिपाटी नै रहेको उनको भनाई छ ।
विराटनगरकी सुमित्रा पासवानले २०६४, २०७० र २०७४ मा भएका निर्वाचनमा फरक–फरक उम्मेदवारलाई मत दिईन । उनले मत दिएका उम्मेदवारले प्रत्येक निर्वाचनमा विजयी भएका छन् । उनले भनिन् ,‘ पुराना नेताको व्यवहार एक कार्यकाल भित्रैमा थाहा भइथाल्ने भएकाले उसलाई पुन ः मत नदिने गरेकी हुँ ।’pharmacy
विराटनगर, २९ कात्तिक । विराटनगर–८ मा निर्माण गरिएको महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिकको आज अनावरण गरिएको...